रबि लामिछाने पक्राउ पर्नु भन्दा केहि मिनेट अगाडी रबि संगको टेलिफोन बार्ता एस्तो छ,किन बोल्न चाहेनन्? – Complete Nepali News Portal
रबि लामिछाने पक्राउ पर्नु भन्दा केहि मिनेट अगाडी रबि संगको टेलिफोन बार्ता एस्तो छ,किन बोल्न चाहेनन्?
Kamal Sargam August 15, 2019
३० साउन, काठमाडौं । प्रहरीले न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई पक्राउ गरेको छ ।उनीहरुलाई न्युज २४ को कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको हो । यसको केही घण्टा अघिमात्रै प्रहरीले कलंकीबाट नर्स अस्मिता कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले बिहीबार साँझ पक्राउ गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।उनीहरुलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नु भाग्दा केहि मिनेट अगाडी रबि लामिछाने संग गरिएको टेलिफोन बार्ता यस्तो छ: